Winter Lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Special manana majika Winter lalao. Tamin'ity indray mitoraka ity ny taona, na dia eo aza ny mafy, amin'ny ankapobeny voafaritra amin'ny alalan'ny sasany hafahafa Mahaliana, indrindra fa amin'ny ankizy. Na ny vanin-taona mafana, tsy miandry fa izany mafy, toy ny ririnina ririnina. Izany no takarina – sled, skates, snowmen sy ny lapa. Fa ny tena zava-dehibe, dia ny taona vaovao! Raha toa ianao ka reraka ny miandry, mankanesa any amin'ny fizarana, izay tsy hifarana amin'ny Krismasy alina, ny oram-panala mahafinaritra foana. Manasa ny rehetra izahay mba hilalao ho maimaim-poana, satria ny olona maro, dia vao mainka mahaliana ny andro izany. Jereo ny fanomezam-pahasoavana, hanorina trano mimanda, mandamina ny oram-panala miady, sledding.
Kamiao ririnina amin'ny ririnina
Dress Up Christmas InstaGirls
Antoko Taom-baovao Baby Hazel
Misaotra anao ry Santa
Fiomanana amin'ny krismasy
Fanadiovana trano Krismasy
Noely Klondike Solitaire
Sofia ny mahagaga Voalohany Sled Foko
X - Mas Fanaviana
Fahasamihafana Tanànan'ny Noely
King miaramila 4
Baby Hazel. Gaga ny serfa
Andron'ny Noely zazakely
Krismasy 5 Fahasamihafana
Fahasamihafana ny ora ririnina
Fifamoivoizana dia mandeha Krismasy
Lalao Winter tamin'ny Category:
Farany Winter Lalao
Fihetseham-po mahery vaika
Fanomezana miafina an'i Santas
Mitaingina soa aman-tsara Santa
Fanomezana an'i Santa
Xtreme Moto Snow Bike Racing lalao
Snowman sy Fighter Jet
Manaova tetezana ary mandehana mahazo fanomezana
Boaty fanomezana noely
Mpihazakazaka be sandry
Lalao Online Rehetra Winter Lalao an-tserasera
Winter – ny oram-panala ady, tia manao ski ambony hazo fijaliana-tany, ranomandry Skating. Raha ny olon-dehibe nofonosina amin'ny akanjo, ny ankizy naidina tamin'ny an-dalambe miaraka amin'ny hafanam-po hisy fiantsoana sy ny somersaults manipy ny oram-panala ao amin'ny nangonin'ny rivotra. Amin'izao fotoana izao ihany ny taona tonga izany rehetra ny angano sy ny Fantasy dia afaka haneho ny tenany mazava tsara indrindra, fa noho ririnina lalao tena malaza sy amin'ny fangatahana.
Ny tena zava-nitranga tao amin'ny Ririnina Lalao
Fa nahoana no miandry iray alina, rehefa misy Winter Lalao? Efa, azonao atao:
Ny ekipa mpanohitra nanipy bainga ny oram-panala,
mba hanao ranomandry trano mimanda,
Dress ny hazo Krismasy amin'ny miloko baolina, Cones sy voninkazo natao fihaingoana,
Mba hanomanana sakafo matsiro teo ambony latabatra,
Eritrereto ny akanjo,
Ary rehefa tonga ny fotoana mba hanolotra fanomezana manampy Santa mba hiatrika ny fitantanana ny sled, bisikileta, Snowboard, ski sy fiara hafa, izay nifidy ho an'ny tenany amin'ity indray mitoraka ity.
Manampy Dadabe Noely
Dadabe Noely, Dadabe Noely izy no miseho ao amin'ny kilalao maro sy ny niainany foana ny manangana ny tsiky. Raha tsy misy dia tsy azo sary an-tsaina Krismasy sy Taom-baovao ny maraina sy ny hazo tsara tarehy. Fety fankalazana ny faran'ny taona – izany vondrona lehibe ny namana, mamirapiratra jiro sy ny haingony boribory na miolanolana, fanomezam-pahasoavana, manan-karena latabatra, vazivazy sy ny hehy, fetibe sy ny fanaovana tiany ho ny naneno ny lakolosy. Eritrereto hoe tsy izany rehetra izany, ary fiainana ho tonga hankaleo, Bland sy hahaliana. Io matetika no very raibeny fanomezana, sy ny fanampiana sarobidy ho any amin'ny fikarohana. Ataovy azo antoka fa tsy manan-janaka efa marina, na fotsiny fety tsy afaka hitranga.
Winter akanjo ho an'ny tovovavy
Eny? Snow zazavavy ary hanampy hifidy ny akanjo nentim-paharazana eo amin'ny fomba, fa naneho saina sy manao ny sary ny iray zest. Angamba ny fandikana ho mahomby kokoa, ary tena Fairytale zafikeliny dadabe no handray, raha manao ny hevitra. Toy izany dia be dia be ny odevalok dia ho hanova maro Divas for fety io, ary miaraka amin'izay koa, tonga amin'ny misy fitoriana ho an'ny tenany. Ny solosaina dikan-ny akanjo avy eo dia tena azo atao ny manao tena dia hamela izany tao amin'ny efitrano tamin'ny fotoana nanamarika ny fankalazana tao amin'ilay sekoly.
New mahandro sakafo
Inona koa no fanatitra Winter Lalao? Ahoana no tonga amin'ny ilay hevitra ny sakafo? Ankizivavy ho tia ny tsy reinvent fomba fanamboarana, sy ny fomba ny lanonana firavaka mba hanamafisana ny tanjon'ny Taom-baovao hariva. Mofomamy ao ny endriky ny olona sy ny firs, voaravaka icing manaiky sy mankasitraka ny zava-drehetra, fa amin'ny nofinofy izany dia tsy voafetra, ary eo anoloan'ny ianao miandry mahaliana be dia be ny hevitra.
Winter firavoravoana feno fietrena ho an'ny ankizilahy
Fa ny ankizilahy dia toy ny fanorenana ny fiarovana mafy ny oram-panala sy ny fitaovam-piadiana ady koa ny fitaovana ihany. Ao amin'ny tokotanin'ny ekipa roa nihaona ka nanapa-kevitra ny hamaha ny ela-mandeha fifandirana ny ady toy izany. Mba handresy ny ady, tsy maintsy mandany vitsivitsy sy hahazo ny fihodinana izay mandresy sy ny hevitra dia ho bebe kokoa. Misy ihany koa ny piozila ny lalao izay tsy maintsy hifindra ranomandry vato eo an-tsaha mba haka azy any an-dafin'i rehetra. Winter fanjonoana lasa anglers fitiavana marina, nefa tsy tokony mba hiaraka amin'izy ireo eny an-dalana, satria efa vonona ny hanolotra anao miasa avy amin'ity tranga ity amin'ny aterineto. Mifidiana tsara, nanipy ny jono sy ny fanaovana firaisana amin'ny trondro, izay hanaikitra eo amin'ny jono.
Mba nahohotatsya ampy, dia afaka mifandray amin'ny Eyti – mponina mivaingan'ny hatsiaka. Ireto misy vazivazy fotsiny dia tsy tia ny zava-drehetra, fa ny pingouins amin'ny hatsikana tsy fantany izay haleha. Hafetsen'ny vorona sy deftly manomboka fisidinana miaraka amin 'ny slingshot. Angamba, noho izany, dia miezaka ny hampianatra azy mba hanidina sy nametraka firaketana ny halavirana Niantoraka. Tsy zhemannichaet Yeti sy ny mpizaha tany, manipy azy eny amin'ny hantsana be ny oram-panala baolina, ary raha ny paparazzi te haka sary, saro-kenatra, ary niafina tao anaty lava-bato. Eto izy ireo, ny Ririnina Lalao.
Fa maro, ririnina dia toerana tena fotoana ny taona. Ary farany nefa tsy ny kely indrindra noho ny fahatsiarovana ny fahazazana. Rehefa dinihina tokoa, tonga ny ririnina fety lehibe indrindra ho an'ny ankizy rehetra, izay tsy afaka hifaninana na dia ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Anarana izany – New Year. Ankoatra izany, ririnina – tamin'ity indray mitoraka ity, tsy mahazatra, ary teo aloha tamin 'izay eo amin'ny vanim-potoana hafa fialam-boly. Rehefa tsy misy dokam-barotra be no hany zavatra izay manana ireo fahaiza-manao ireo Skating. Mitaingina, mazava ho azy, azo atao sy amin'ny faritra mihidy, fa mila ny vola ary, ny vokatr'izany, ny fanapahan-kevitra ny ray aman-dreny. Fa vonton'ny tokotanin'ny rink – tonga lafatra.
koa ririnina – ny fotoana ihany no afaka hilalao ao amin'ny oram-panala sy ny fanaovana snowmen. Taorian'ny vanin-taona mafana oram-panala, izay mifanohitra amin'ny ranomandry, sarotra ny mahita amin'ny toerana hafa ankoatra ny tao anaty vata fampangatsiahana. Ary raha tsy tonga ny ririnina nefa, dia izay rehetra niandrandra, dia afaka voly ririnina lalao an-tserasera. Araka ny lohahevitra dia ny sakany, dia ny isan-karazany ny Lalao dia tena isan-karazany. Be dia be izany no natokana ho ririnina fanatanjahan-tena. Mety ho nidobodoboka be ny ski sy snowboards eo amin'ny mampitolagaga jumps sy ny slalom, ary na dia raha mbola hafakely noho ny Latitude curling. Saika ny rehetra mba homena fahafahana tena manan-karena ny hamorona lalao mahaliana. Na dia tsy misy firenena matanjaka indrindra, ny mahery fo dia afaka mihetsika sy tsy manao mahavariana mitsambikina, araka ny tokony ho amin'ny fanatanjahan-tena tafahoatra. Ary hanao ny lalao manintona kokoa, mpandraharaha mifidy toerana tena endri-tsoratra ny mpanatrika. Danja izy ireo na inona na inona, ohatra, ny fiadiana plumber Mario snowboarding na nataony Mickey Mouse amin'ny ski. Fa ny tena mahery fo malaza Winter Games na mbola ny Dadabe Noely sy ny Dadabe Noely.
Ny toerana manokana dia vorondrano. Io mponina an-mangatsiaka saika sisiny dia heverina ho toy izany maintsy antoko lalao. Misy Ririnina Games, ary ny dikan-tenin'ny shooter – Biathlon. Ary izy rehetra dia mpankafy ny mpitifitra, fara fahakeliny, indray mandeha tao an-milalao. Izany in-droa toy ny sarotra. Tsy maintsy tsy mahazo tsara ny ampinga lehibe, fa amin'ny mirazotra ny hifehy ny toetra amam-panahy, ka tsy niala ny lalana. Ny zavatra rehetra, toy ny ao amin'ny biathlon ity. Ny karazana « ririnina shooter » ny Toy izany koa hoe andiana tselatra aelin'ny momba ny milalao snowballs. Hitifitra eto amin'ny zavatra rehetra – ao amin'ny lasibatra manokana, amin'ny mandositra snowman na virtoaly mpanohitra, izay afaka mamaly marina koa mitora. Koa raha tsy misy lalana fotoana izao ho any amin'ny misy Ski ala nenina – manandratra ny fanahy mianatra ririnina lalao eo amin'ny toerana. Niezaka izahay misafidy ho anareo ho famoriam-bola ny tena mahaliana, maro loko, ary, mazava ho azy, afaka.